ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုမလဲ။ - Hello Sayarwon
Update Date ဒီဇင်ဘာ 10, 2020 .2mins read
အစားတွေ ကောင်းကောင်းစားနိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ပါးစပ်ထဲမှာ ပုလဲလုံးလေးတွေလို သီထားတဲ့ သွားလေးတွေပါ။
သွားလေးတွေက ခန္ဓာကိုယ် အာဟာရလိုအပ်ချက် ပြည့်မီစေဖို့ အစားအစာတွေကို ကြိတ်ဝါးတာ၊ ကိုက်ဖြတ်တာတွေလုပ်ပေးပါတယ်။ သွားတွေက ထိုက်သင့်သလောက် ချေဖျက်ပြီးတဲ့အစားတွေကို အစာရေမျိုကနေတဆင့် အစာအိမ်ထဲကို ပို့ပြီး ချေဖျက်တာပါ။
အစာမ​ကြောဖြစ်မယ် သေချာဝါးပါဆိုတာကိုက သွားတွေက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာပါ။ သွားကောင်းနေမှ အာဟာရပြည့်ဝမှာပါ။ အာဟာရပြည့်ဝမှလည်း ကျန်းမာမှာလေ။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာပြီး အာဟာရပြည့်စေဖို့ အရေးပါတဲ့ သွားလေးတွေကို သေချာ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဆိုရင် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ လိုမလဲ……….
သွားနဲ့ ခံတွင်းမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေ တွေ့ရပြီဆိုရင် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုပါမယ်။
သွားတိုက်ပြီးတဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) သွားပွတ်ကြိုးသုံးပြီးတဲ့အခါ သွေးထွက်ရင်
သွားတိုက်ပြီးတဲ့အခါ သွားပွတ်တံမှာ သွေးစလေးတွေ တွေ့ရင်၊ ပလုတ်ကျင်းလိုက်တဲ့အခါ သွေးစလေးတွေ ပါလာမယ်ဆိုရင် သွားဖုံး ကျန်းမာရေး ပြဿနာရှိတောပါ။ ရေစီးကမ်းပြိုဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်သလို သွားဖုံးပိုးဝင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွားဖုံးက တစ်ရှူးတွေ ပိုးဝင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေကို မကုသဘဲ ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် သွားတဝိုက်က အရိုးတွေ ဆုံးရှုံးတာ၊ သွားဆုံးရှုံးတာတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွားဖုံးမှာ သွေးစလေးတွေ၊ သွေးထွက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်သလို သွားဖုံး နီရဲတာ၊ ရောင်ရမ်းတာ၊ သွားဖုံးတွေ နာတာ၊ သွားနဲ့ သွားဖုံးကြားမှာ ပြည်လိုအရာတွေ ထွက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွားဖုံးတွေက အောက်ဘက်ကို ကျလာပြီး သွားခြေတွေ ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအခြေအနေကို အသက် ၆၅ နှစ်အထက် ဘိုးဘိုးဘွားဘွား ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်တာက သွားဖုံးရောဂါ ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။
ဒီလိုအခြေအနေက သွားတွေရဲ့ မြဲမြံမှုကို ထိခိုက်စေပြီး သွားခြေတွေကို ပျက်စီးစေတာ၊ သွားပိုးစားတာ၊ သွားနဲ့ သွားဖုံး ပိုးဝင်တာ၊ နာတာ၊ သွားဆုံးရှုံးတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ စောစောသိ စောစော ကုသမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး တားဆီးနိုင်မှာပါ။
ကျန်းမာတဲ့ ခံတွင်းဆိုတာ တံထွေးထွက်ပြီး စိုစွတ်မှု ရှိရပါမယ်။ တံထွေးထွက်နေမှ သွားကြိုသွားကြားထဲက အစာတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး သွားမှကြပ်တွယ်နိုင်တဲ့ သွားချေးတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။
တကယ်လို့ တံထွေးမထွက်ဘဲ ခံတွင်းက အမြဲခြောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်ခုခု နာမကျန်းဖြစ်နေတာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ခံတွင်း အစိုဓာတ်ကို ပြန်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုပါမယ်။
ငယ်သွားတွေက လဲတတ်ပေမယ့် ကြီးသွားတွေကတော့ တစ်သက်တာလုံး ရှိနေမယ့် သွားတွေပါ။ တကယ်လို့ ကြီးသွား လဲပြီးချိန်မှာ သွားတွေက ယိုင်မယ်။ နဲ့မယ်။ ကျဲမယ်ဆိုရင် သွားဖုံး ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်သလို သွားတဝိုက်က အရိုးတွေ ဆုံးရှုံးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲမှာ အဖုတွေ ပေါက်မယ်ဆိုရင်
ပါးစပ်ထဲမှာ အနာဖြူဖြူလေးတွေ ပေါက်တာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီ အနာဖြူဖြူလေးတွေက ၂ ပတ်လောက်ဆို သူ့အလိုလို သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ပါးစပ်ထဲက အနာတွေက မသက်သာသွားဘူးဆိုရင်တော့ ပါးစပ်ထဲမှာ မှက္ခရု ပေါက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို မှိုပိုးကူးစက်ခံရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ။ ပါးစပ်ထဲမှာ အနာဖြစ်တာနဲ့အတူ လျှာတွေ မှာပါ အနာဖြူတွေ ဖြစ်မယ်။ ပါးစောင်၊ အာသီး အာခေါင် စတာတွေမှာပါဖြစ်မယ်ဆိုရင် သွားနဲ့ခံတွင်း စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုပါပြီ။
ဆီးချိုရှိသူတွေ၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်သူတွေမှာ ပါးစပ်ထဲမှာ မှက္ခရုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သွားကိုက်တာက လူတိုင်း နီးပါး ခံစားရနိုင်ပေမယ့် ခဏခဏ သွားကိုက်နေတာက ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ရှိနေဲ့ လက္ခဏာပါ။ သွားကိုက်တာက သွားနဲပ သွားဖုံးကို ထိခိုက်မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် သွားကိုက်တဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲ သွားနဲ့ ခံတွင်းပြဿနာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ဆေးခန်းပြီး စစ်ဆေးမှု ခံယူတာ အကောင်းဆုံးပါ။
သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာစေဖို့
သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာရေးက ပုံမှန် ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာပါ။ ၆ လတစ်ကြိမ် ပုံမှန် စစ်ဆေးဖို့ လိုပါမယ်။ နေ့စဉ် ဂရုစိုက်ရမှာကတော့
တစ်နေ့ကို မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပုံမှန် သွားတိုက်ပါ
သွားပွတ်တံကို ခပ်ပျော့ပျော့လေးပဲ သုံးပါ။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သွားပွတ်ကြိုး သုံးပါ။
ဖလိုရွိုက်ပါတဲ့ သွားတိုက်ဆေး ရွေးချယ်ပါ။
၆ လတစ်ကြိမ် သွားပုံမှန် စစ်ဆေးပါ။
Listen to your mouth:6signs you need to see the dentist https://www.aetna.com/health-guide/warning-signs-you-need-to-see-the-dentist.html Accessed Date 26 November 2020
12 Signs You Need to SeeaDentist http://www.mouthhealthy.org/sitecore/content/home-mouthhealthy/top-reasons-to-visit-dentist Accessed Date 26 November 2020
သင်လုံးဝ မထင်မှတ်ထားပေမယ့် နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပြဿနာ ၁၂ ရပ်
နှလုံးရောဂါ၊ Heart Attack၊ အသေအပျောက်အများဆုံး၊ သွားနဲ့ခံတွင်း၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ သွေးဆုံးခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ stress၊ အထီးကျန်
နှလုံးနှင့်သွေးကြော ကျန်းမာရေး, နှလုံးရောဂါ ဇူလိုင် 16, 2020 .2mins read
ပါးစပ် ခန္ဓာကိုယ် antibodies အစာခြေ အရသာခံ သွားဖုံး သွားပိုးစားတာ လက္ခဏာ ခံတွင်းခြောက် အင်ဇိုင်းတွေ ခံတွင်းအနံ့ဆိုး ဘက်တီးရီးယား
အခြားခံတွင်းရောဂါ ပြဿနာများ, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး ဇူလိုင် 3, 2020 .2mins read
အစာအာဟာရ၊ သွားနဲ့ ခံတွင်း၊ ချို့ယွင်း၊ ခံတွင်းနံ့ဆိုး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပန်းရောင်သန်း၊ မာကျောကြံ့ခိုင်၊ ရေခဲရေ၊ သွားဖုံး၊ သွားပိုးပေါက်၊ သွားထိန်း၊ သွားတိုက်
သွားဖုံးနှင့် ခံတွင်းရောဂါများ, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး ဇွန် 24, 2020 .2mins read
braces သွားထိန်း သွားစွပ် သွားညှိ သွားထပ် သွားနာ သွားဖုံးရောင် သွားတိုက် သွားကျန်းမာရေး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သွားတိုက်တံ သွားပွတ်ကြိုး ပလုပ်ကျင်း အစာမစားနိုင်
သွားပြဿနာများ, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး ဇွန် 12, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 21, 2020 .2mins read